admin, Author at Like For Nepal
दु:खद खबर; को-रोना विरुद्धकाे दुवै डोज खोप लगाएका २३ वर्षका युवकको मृ`त्यु !
दु:खद खबर; को-रोना विरुद्धकाे दुवै डोज खोप लगाएका २३ वर्षका युवकको मृ`त्यु ! दु:खद खबर; को-रोना विरुद्धकाे दुवै डोज खोप लगाएका २३ वर्षका युवकको मृ`त्यु ! को-भिड संक्रमण दर कम हुँदै गएपनि यसको जोखिम भने घटेको छैन । बांकेमा एक २३ वर्षका युवकको को- भिडका कारण नि-धन भएको छ । बाँकेको नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा उपचाररत एक युवकको नि- धन भएको हो । खजुरा गाउँपालिका-२ निवासी २३ वर्षीय युवकको आइतवार बिहान भेरी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृ- त्यु भएको जिल्ला को- भिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका स्रोतव्यक्ति तेज वलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार को- भिड विरुद्धको दुवै मात्रा खोप लगाएका उनलाई गत माघ २७ गते पिसिआर गर्दा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि भेरी अस्पतालमा भर्ना गरिएका उनको उपचारका क्रममै नि-धन भएको हो । यो सँगै बाँकेमा को- भिडबाट मृ- त्यु हुनेको सङ्ख्या ३५१ पुगेको छ । श...
खान नपाउदा5लाखमा किड्नि बेचिन क ठै बरा, हेर्नुस् मार्मिक
काठमाडौं तामाकोसी नजिक को यो निकैनै मार्मिक समाचार रहेको छ। खान नपाउदा र आफ्नो बच्चालाई पाल्नकै लागि भएपनी5लाखमा किड्नि बेचिन क ठै बरा । किड्नि बेच्ने आमालाई पनि सानोमा फालेको तर एउटा बुढाे मान्छेले पालेर हुर्काएको भन्दै आफ्नो कहानी सुनाउछिन। पुरै घिस्रेर हिड्नु पर्दथ्यो त्यही कारण ले गर्दा नै मलाइ फलेको कुरा सुनाउछिन। यदि मेरो बच्चा नभएको भए उहिले मर्थे यहि दु: ख गर्न परेको रैछ र पो म बाचेको रैछु भन्दै आफ्नो ब्यथा सुनाउछिन। जिउ भरिनै घाउ नै घाउ रहेको र साच्चिकै नै मरेर नै बाचेको रैछिन। कोठा भाडा तिर्न नसकेर किड्नि बेचेको । त्यो बेचेको5लाख पनि एता न उता भयो भन्दै रुन्छिन । श्रीमान ले बच्चा पेट मा हुदा छाडेको कुरा उनी सुनाउछिन। म दुर्घटना मा परि हात खुट्टा भचिएको ले गर्दा मलाइ छ्द्नु भएको बताउछिन। एउटा हात पनि छैन खुट्टा पनि एउटा चल्दैन ।यो अवस्था मा उनिलाइ निकैनै गार्हो भैरहेको...
उल्टोे हिँडेर विश्व रेकर्ड बनाउने तयारीमा जुटेका दाङ तुलसीपुर– ३ रानागाउँका ऋषिराम परियार अहिले सिरहाको धनगढी पुगेका छन् । दुई साताअघि मेची–महाकाली उल्टो पैदल यात्रा सुरु गरेका परियारले हालसम्म दुई सय ९२ किलोमिटरको यात्रा पूरा गरिसकेका छन् परियार उल्टो पैदल यात्रा थालेको आज (शुक्रबार) १४ दिन भयो । दैनिक २२ किलोमिटरसम्म यात्रा गर्ने परियारले अहिलेसम्म बिसाएका छैनन् । मुख्य राजमार्गको एक छेउ भएर निरन्तर हिँडिरहने ऋषि झोलामा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा सिउरिएर हिँड्छन् । राष्ट्रिय भेषभूषा दौरा सरुवाल, निलो स्टकोट र कालो भादगाउँले टोपीमा सजिएका परियार ठाउँअनुसारको भेषभूषा लगाउँछन् । मधेस प्रदेश टेकेपछि धोती–कुर्ता लगाएर आफ्नो यात्रालाई निरन्तरता दिने ऋषि यो यात्रामा एक्लै छन् । तर सामाजिक सञ्जालमार्फत उनको अभियानबारे थाहा पाएका स्थानीहरू पनि सँगसँगै हिँड्छन् । सुरुमा मेरो अभियानबारे कमै मा...
दाहसंस्कार सकेर फर्किँदा प्युठानमा सबैलाई हैरान बनाउने घ’टना घ’ट्यो
दाहसंस्कार सकेर फर्किँदा प्युठानमा सबैलाई हैरान बनाउने घ'टना घ'ट्यो । दाहसंस्कार सकेर फर्किँदा प्युठानमा सबैलाई हैरान बनाउने घटना घटेको छ । अन्तिम संस्कार सकेर फर्किएका मलामीमाथि आक्रमण भएको हो । सो घटनामा संलग्न चार जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानले पक्राउ गरेको छ । बुधबार दिउँसो झिमरुक नदीमा दाहसंस्कार सकेर फर्किंदै गरेका मलामीलाई ३०/३५ जना युवाको समूहले आक्रमण गरेको थियो । दाहसंस्कारमा सहभागी शमशेर नेपालीले यसको जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रहरी निरीक्षक देवीप्रसाद गैरेले घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पुरानो रिसइबीका कारण उक्त घटना भएको प्रारम्भिक जानकारीमा आएको पनि बताउनुभयो । प्रहरीले घटनामा संलग्न चार जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । घटनाको विषयलाई लिएर युवा सङ्गठन नेपालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न...
घान्द्रुक दुर्घटनामा दुवै छोरी गुमाएकी यि आमाको अवस्था बेहाल, भनिन् ‘जन्माउँदा मेरो कोख
घान्द्रुक दुर्घटनामा दुवै छोरी गुमाएकी यि आमाको अवस्था बेहाल, भनिन् ‘जन्माउँदा मेरो कोख दुखेन तर आज सारा शरीर पोलीरहेछ । पोखराबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिका–११ घान्द्रुक जाँदै गरेको जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका बिद्यार्थीहरु काठमाडौंबाट घुम्नका लागि गएका थिए । जसमिध्ये थिए २४ वर्षीया सुजा चौधरी र २० वर्षीया लिजा पनि । बिएससी नर्सिङ चौथो वर्षमा अध्यनरत सुजा र लिजा कान्तिपुर डेन्टल कलेजमा बिडिएस पढ्दै थिइन्। घान्द्रुक दुर्घटनामा उनीहरू दिदीबहिनी नै परे। आमा पार्वती र बुबा बाबुरामका सन्तान यी दुई छोरी मात्र हुन्। दुर्घटना भएको खबर पाउनासाथ उनीहरू हेलिकप्टर चार्टर गरेर पोखरा झरे। दुर्घटनामा दुवै छोरी गुमाएको आमा पार्वतीलाई थाहा थिएन। छोरी दुर्घटनामा परेको खबरले मात्रै पनि उनी आत्तिएकी थिइन्। अस्पतालको आकस्मिक कक्षअगाडि असह्य पीडा पोखिरहेकी थिइन्। मृतकहरू काठमाडौंको गोंगबुबाट घुम्न गएकाहर...
छो;रा बु;हारीले घर;बाट निका;लेपछि एक्लै बाटो;मा यि बु;ढी आ:मा भ;न्छिन्
जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा नजिकैको एक बौद्ध गुम्बा पछाडि सानो काठको टहरामा ८३ वर्षीया वृद्धा गाँस बासको खोजीको सहारामा भौतारिएको अवस्थामा भेटिनुभयो । पत्रकारको टोली त्यहाँ पुग्दा सोही गुम्बामा बस्ने पुजारीले उहाँको अवस्था जानकारी गर्न थाल्नुभयो । पुजारीले साहाराविहीन व्यक्ति खान, बस्न पनि समस्या भएको बताउनुभयो । महिला बोल्न हिचकिचाइरहनुभएको थियो । केही छिनमा उहाँलाई बाहिर बोलाएर गुम्बा अगाडि उहाँको परिचय र अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन खोज्दा ८३ वर्षीया ज्येष्ठ नागरिक महिलाले अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन । मुगुको डोल्पु स्थायी ठोगाना बताउने महिला वर्षौंदेखि बास र गाँसको खोजीमा भौतारी रहनुभएको छ । जुम्ला सदरमुकाममा चार वर्षदेखि माग्दै हिँड्ने गर्नुभएकी र अन्तिममा बस्ने व्यवस्था कतै नभएपछि उहाँ गुम्बाको आश्रयमा गएर ओत लिइरहनुभएको छ । नाम साङ्गे फटिङ बताउने ती महिलाले २० वर्...
एउटा सानो गल्तीले भरतपुरमा ८ वर्षीय बालक आफ्नै घरको गेट’मै अस्ता’ए भरतपुर महानगरपालिका–११ विशाल चोकका आठ व’र्षी’य बालकको गेट’ले कि’ चे र ज्या’न गए’को छ। गेटमा खेल्ने क्रममा आफ्नै घरको गे’टले कि’ चे र स्थानीय अमृत अधिकारीका छोरा एरिस अधिकारीको कात्तिक १८ गते तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिन साँझ ज्या’न गएको हो ।उनलाई गेटले किच्नासाथ चितवन मेडिकल कलेजमा उ’प’चारको लागि लगिएकोमा उपचार’को क्र’ममा मृ’ त्यु भएको चितवन प्रहरी प्रवक्ता सूर्य थापाले जानकारी दिए ।गेटमा खेल्ने क्रममा आफ्नै घरको गे’टले कि’ चे र स्थानीय अमृत अधिकारीका छोरा एरिस अधिकारीको कात्तिक १८ गते तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिन साँझ ज्या’न गएको हो ।उनलाई गेटले किच्नासाथ चितवन मेडिकल कलेजमा उ’प’चारको लागि लगिएकोमा उपचार’को क्र’ममा मृ’ त्यु भएको। चितवन प्रहरी प्रवक्ता सूर्य थापाले जानकारी दिएतनहुँको डुम्रे भन्सार स्थायी बासिन्दा रहे’का ...
यी नै हुन, दाङमा आग’लागी हुँदा मृ,त्यु हुने एकै परिवारका ३ जना ,जो ज’लेर एकै छिनमा ख’रानी भए
यी नै हुन, दाङमा आग’लागी हुँदा मृ,त्यु हुने एकै परिवारका ३ जना ,जो ज’लेर एकै छिनमा ख’रानी भए दाङको तुलसीपुरस्थित एक जुत्ता चप्पलको गोदाममा लागेको भी’षण आग’लागीमा प’रेर पाँ’च जनाको मृ,त्यु भएको छ। गएराती पौने २ बजेदेखि इरम फुटवेयर चप्पल गो’दाम रहेको चा’र तले घरमा लागेको आगोमा परेर एक म’हिला २ पुरुष र दुई बालबालिकाको मृ,त्यु भएको प्रहरीले बताएको छ । मृ,त्यु हुनेमा १३ वर्षीया सजिाता खातुन, १४ वर्षीय हसन बकस, १५ वर्षीय मसिन बकस, ४० वर्षीय नजरदिन अली, पाँच वर्षीय, अबिददिन अलिको मृ,त्यु भएको प्रहरी जनाएको छ । मृतकहरुको शव जलेको अवस्थामा निकालिएको छ । मृ’तकको श’व अहि’ले तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रा’देशिक अस्प’ताल तुल’सीपुरमा लगिएको प्रहरीले बताएको छ । घा,इतेहरुको पनि राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । आगो अहिले नियन्त्रणमा आएको छ । मृ’तकको शव बिहीबार पोस्ट’मार्टमपछि आफन्तको जिम्मा ...
पारस सरकारलाई बिहे गरौँ भन्दा ‘यो हुन सक्दैन’ भन्नुभो अनि मर्नलाई 'पासो' लगाएँ सोनिका रोकायले पूर्व युवराज पारस शाहसंगको प्रेमका बारेमा नयाँ दाबि गरेकी छन् । उनले एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै आफ्नो मनमा प्रेम उब्जिएको र पारससंग विवाहको प्रस्ताव राखेको बताएकी छन् । पारससंगसंगै हिड्दा आफुहरुको सम्बन्धलाई लिएर मानिसहरुले धेरै कुरा गरेको भन्दै आफुले पारससंग विवाहको प्रस्ताव राखेको सोनिकाले बताएकी छन् । उनले भनिन् मलाई पारसले परिवर्तन गराउनुभयो । पहिलाको सोनिकावाट अहिलेको सोनिका बनाउनुभयो । तर उहाँले मलाई एक चेलीको रुपमा हेर्नुहुँदो रहेछ । मेरो मनमा पा प प लायो । मैले नै पारसलाई मलाई बिवाह गर्नु भनेँ । तर पारसले यो हुन सक्दैन भन्नु भयो । त्यो कुरा मैले सहन सकिन । आफुलाई ५ दिन सम्म कोठामा थुनेर राखेँ । उनले त्यतीबेला पनि आफुलाई बचाउन पारसले निकै सहयोग गरेको बताएकी छन् । कोठामा आफुले म र्ने क...
बैदेशिक रोजगारीको क्रममा अहिले देशमा जति रेमिटेन्स भित्रिएको छ त्यति नै मात्रामा सामाजिक बिकृती पनि निम्तिएको हामिले देख्दै र सुन्दै आएका छौँ ।घर परिवार लाई केही कमाएर सुख दिने आशमा बिदेशिएका कयौ युवा युवतिहरु बिदेशमा गएर दुख गर्छन । तर उनिहरुले दुख गरि कमाएर पठाएको पैसा लिएर उनिहरुकाश्रीमान तथा श्रीमतिहरु अरुसगँ हिँड्ने गरेको थुप्रै पाइने गरेको छ अहिले । अहिले यस्तै समस्या लिएर मिडियामा एक ब्याक्ती आएका छन ।धनकुटा घर भएका सनम राई अहिले वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा मलेसियामा रहेका छन । ४/५ वर्ष अघि मलेसिया पुगेका सनम आफ्नी श्रीमतिले पैसा खाएर फ’रार भएको फोन सम्पर्कमा बताए । बाबू आमा तथा आफ्ना आफन्त कोहि नभएका सनमको मलेसियामा हुँदै एक महिलासगँ कुराकानी हुन थालेको सनम बताउँछन् ।आफु पहिले नै बिबाहित भएको भएता पनि श्रीमानले राम्रो ब्याबहार नगरेको कारण छुट्नु परेको भनी उक्त महिलाले आफुला...